Manana mpahay lalàna ve Ravalomanana sy...? | Hevitra MPANOHARIANA
Manana mpahay lalàna ve Ravalomanana sy...?
2009-02-04 @ 21:54 in Politika
Nampiakatra ny hambom-pon'ny mpanohana ny TGV ilay fanendrena PDS vonjimaika notontosaina omaly 03 febroary 2009 ka nahitan'ny mpitarika ny fihetsiketsehana hevitra vaovao hanohizany ny tolona indray. Diso paika tanteraka noho izany, araka ny fijeriko, ny teo amin'ny fitondrana maika nanendry olona hitantana an'Antananarivo Renivohitra ao anatin'izao vanim-potoana mbola mahamay izao. Na dia tsy nitombo betsaka manao ahoana aza ny mpanaraka azy amin'izay alehany dia lasa "nazoto" nitolona indray ireo sisa nanaraka azy. Ny lainga sy ny tsaho afafy moa manaraka eny foana, io angamba araka ilay fomba fitenina "nazi" iray tsipalotro tamin'ny andro nanomezana maimai-poana ny gazety Imongo Vaovao fony ny AKFM no nitantana an'Antananarivo renivohitra manao hoe: "Mandaingà, mandaingà hatrany fa tsy maintsy misy inoan'ny olona ihany ireny amin'ny farany."
Raha ny fahazoako ny resaka moa dia "samy hafa" ny teny hoe "fampiatoana" sy ny teny hoe "fanalàna" eo amin'ny voambolan'ny lalàna raha mikasika ny tranga toy ny eto an-drenivohitra no jerena. Namerina namaky ny taratasin'ny Minisitry ny atitany manontolo aho fa nisy hafetsena be dia be tao anatiny, na dia tsy manam-pahaizana momba ny lalàna aza aho dia izay kely fantatro no ambarako, nefa tsy voatery ho izay voalazako no marina:
Voalohany: Eo amin'ny lohateny hitako dia voasoratra hoe: "Ministeran'ny Atitany - Didim-pitondrana laharana faha-1919/2009 Ananganana Delegasiona manokana eo anivon’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo". Tsy misy soratra velively eo milaza hoe "Aato" na "esorina" amin'ny toerany ny Ben'ny tanànan'Antananarivo. Mahavariana ihany io tranga io eo amin'ny sehatry ny lalàna satria tsy misy filazana manao hoe "tsy manao ny asany intsony ny Ben'ny tanàna". Koa raha araka ny fijeriko dia na tahotra na hafetsena ny tsy nampiasana ny iray voambolana voatonona teo na hoe "Ity didim-pitondrana ity no manafoana ny maha-ben'ny tanàna an'Antananarivo an'i Andry Rajoelina". Tena hafahafa e! Mamandrika ve ny ao amin'ny Minisiteran'ny atitany sa nanadino ny zavatra tokony hosoratana amin'ny zavatra toy itony sa izaho mihitsy no tsy mahay lalàna?
Faharoa: Eo amin'ny savaranonando mahazatra misy ny filazalazana hoe araka ny... araka ny io dia misy ny filazana roa farany manao hoe:
"- Araka ny didim-panjakana laharana faha-2009-130 tamin’ny 21 janoary 2009 mametra ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Atitany sy fandaminana ankapobe ny Ministerany;"
"- Araka ny tatitra laharana faha-152- MINTER/PRFPOL/AG/ Cf tamin’ny 30 janoary 2009 mikasika ny anjara raharaha sy ny fomba fiasan’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo;"
Ireo voasoratra anankiroa ireo dia tamin'ity taona 2009 ity ka ataoko fa be no mbola tsy mahalala izay votoatin'izay voalaza ao anatin'ireo. Noho izany, sarotra ny hiteniteny foana amina "fiadiana" tsy fantatra akory nefa efa mitoetra ho karazana lalàna. Isika Malagasy rahateo tsy miraharaha lalàna loatra raha tsy efa iharany ka eo vao mipenipenina etsy sy eroa.
Fahatelo: ny andininy voalohany dia manambara fa "hisahana vonjimaika ny andraikitra nomena ny ben’ny tanàna sy ireo mpikambana ao amin’ny birao mpanatanteraka sy ny Filan-kevitra monisipalin’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo, Faritra Analamanga" izany delegasiona manokana izany. Vonjimaika no voasoratra fa tsy fantatra mihitsy hoe mandra-pahoviana izany vonjimaika izany. Tena tsy mahalala ny fandehan'ny lalàna aho ka izay mahay aoka hanazava aza fady indrindra. Raha ny tokony ho izy manko dia tsy tokony hivoaka ny lalàna mihitsy ny zavatra atao. Eto raha jerena dia tsy ny Ben'ny tanàna ihany no "soloina" vonjimaika fa ny mpitantana rehetra eto amin'ny fiadidiana an'Antananarivo ambonivohitra. Raha ny Ben'ny tanàna irery no "soloina" vonjimaika dia tokony ho ny iray amin'ny lefiny (toa an-dRamatoa Ratsivalaka Michelle izay napetrak'i Andry Rajoelina ohatra) no "misolo" azy. Koa raha "soloina" avokoa araka ny taratasy ny mpitantana rehetra, mazava ho azy raha olona ivelan'ny fitantanana mihitsy no "tendrena". Izay aloha no mba takatry ny lohakeliko ny amin'iny. Hapetrako ho tovana etsy ambany moa ny fanambaran'ny Minisitry ny atitany iray manontolo.
Etsy andanin'izany moa dia faly tamin'ny tsi-fanarahan-dalàna araka ny voalazany ny TGV, baiko vava no nilazana fa tsy manankery intsony ny sefom-pokontany eto an-drenivohitra sy manerana ny nosy ka hosoloina sefom-pokontany avy amin'ny lisitry ny TGV avokoa izy ireo. Tsy mbola nahitako taratasy ofisialy aloha fa asa izay fivoahany aoriana kely ao. Hatramin'izao dia toy ny "baiko am-bava" no nametrahana an-dRatsivalaka Michelle tsy fantatra intsony na maire na PDS. Nakatona avokoa ny biraon'ny boriborintany rehetra androany ho setrin'ny fivohan'ny biraom-pokontany rehetra sy ny minisitera rehetra mbamin'ny asa sy fianarana hafa rehetra. Mazava loatra, araka ny fijeriko, fa ny hanakatona ny birao-mpokontany rehetra no tena tanjon'ny TGV mba tsy hisy hivoaka ny taratasy rehetra ilain'ny mponina ara-panjakana higafiana ny mponin'Antananarivo maro an'isa tsy mety manaraka ny tolony intsony. Izay, araka ny fijeriko, no ibaikoany ny mpanaraka azy, rahampitso alakamisy 5 febroary 2009, hanolo sy sefom-pokontany rehetra... nefa inona moa no hanoloana izay "efa tsy manankery" araka izay nolazainy? Noadinoiny manko ny niteny hoe "miasa amin'izao fotoana izao" (loza koa ity nanjary mijery pitsopitson-javatra ity noho ny lalàna). Mazava loatra fa gafy tena gafy no ataony fa tsy zavatra hafa intsony (vao maika nanamarina ilay fandrahonana azona mpanatontosa tetikasa iray manao hoe ajanony avokoa ny asa ataonareo rehetra fa an'ny fitondrana tetezamita izao ny fahefana, mpitondra aiza no mibaiko ny olona tsy hiasa?)
Manaraka izany, notohizan'i Andry Rajoelina soa aman-tsara ny fahadisoana nataon-dravalomanana fony nitsidika ny RNM sy ny TVM niampanga an-dRatsiraka Roland sy ny Jly Rasolosoa Dolin ho tao ambadiky ny fandrobana sy fandoroana nandritra ny tontolo andron'ny 26 janoary 2009; ny mpanaraka ny TGV dia nilaza fa toa "lynchage" atao amin'ireny olona ireny no nokendren'ny filoha fa tsy ny hitondra ny raharaha eny amin'ny fitsarana velively. Mihamibaribary fa ady sy korontana no tadiaviny hitranga eto Madagasikara ary efa hita taratra teny Mahamasina fa efa vonona ho amin'izany mihitsy "ireo sisa manaraka azy". Notabatabaina indray manko teny Mahamasina fa maka mpikarama an'ady ireo lehiben'ny tsena reehtra teo aloha, ka tafiditra anatin'izany ny lehiben'ny tarika mpihira rock Green. Inona tokoa no nitranga avy teo? rehefa nihazakazaka nankeny Tsimbazaza noho ny tsaho ny mpanohana ny TGV nefa tsy nahitana na inona na inona tany dia nifanena tamina lehibena tsena teo aloha tokoa. Efa saiky nanomboka ny daroka io lehibena tsena io fa niato izany satria nanatrika teo sy naka ny sary ny mpanao gazety avy amin'ny tvplus madagascar (izay efa mamoaka ny vaovaony ao amin'ny vohikalan'ny http://www.tvplusmadagascar.com/ ); tsy nanaiky ny hamaliana na hanazaan'ilay lehiben'ny tsena mihitsy ry zalahy fa komondry na felaka no mandeha raha vao miteny ilay io (izany no mpitaky demaokrasia aminy!). Mampatahotra dia mampatahotra ny maro ihany koa ny tenin'i Andry Rajoelina manao hoe : "Raha ilaina ny fanehoan-kery dia amin'ny Asabotsy no endriny"; endrika fanehoan-kery tahaka ny ahoana moa izany satria efa niantso ny mpanohana azy izy hitondra ny vady aman-janany avy amin'io sabotsy io.
Farany, mivanitika dia mivanitika aho mahita fa nanaraka ny fanaoko nandritra ny kabary fanokanana ny kianjan'ny demaokrasia izay nanakianana sy niampangana ahy ho mpandainga na ny topmada.com androany na ny sobika.com nandritra ny andro vitsivitsy izay manao karazana mivantana milaza ora. Tena fanka-tahaka hay ny http://jentilisa.blaogy.com manana ny anarana Maharesaka VETO na dia olon-tokana aza no mamelona azy.
jentilisa, 04 febroary 2009 @ 23:55 ora eto Antananarivo
Ministeran'ny Atitany - Didim-pitondrana laharana faha-1919/2009
Ananganana Delegasiona manokana eo anivon’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo
NY MINISITRY NYATITANY ,
Araka ny Lalàm-panorenana;
Araka ny lalàna laharana faha-93-005 tamin’ny 26 janoary 1994 anoritana ny politika ankapobe itondrana ny fanapariaham-pahefana;
Araka ny làlana laharana faha-94-008 tamin’ny 26 aprily 1995 mikasika ny fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny anjara raharahan’ny Vondrom-paritra anapariaham-pahefana;
Araka ny hitsivolana laharana faha-2007-001 tamin’ny 8 oktobra 2007 mikasika ny fifidianana any amin’ny Kaominina;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2007-022 tamin’ny 20 janoary 2007 anendrena ny Praiministra sady lehiben’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2008-427 tamin’ny 30 aprily 2008 novaina sy nofenoin’ny didim-panjakana laharana faha-2008-596 tamin’ny 23 jona 2008, laharana faha-2008-766 tamin’ny 25 jolay 2008 ary laharana faha-2009-001 tamin’ny 4 janoary 2009 anendrena ireo Mpikambana ao amin’ny Governemanta;
Araka ny didim-panjakana laharana faha-2009-130 tamin’ny 21 janoary 2009 mametra ny anjara raharahan’ny Minisitry ny Atitany sy fandaminana ankapobe ny Ministerany;
Araka ny tatitra laharana faha-152- MINTER/PRFPOL/AG/ Cf tamin’ny 30 janoary 2009 mikasika ny anjara raharaha sy ny fomba fiasan’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo;
DIA MAMOAKA IZAO DIDY IZAO:
- Atsangana ny delegasiona manokana ahitàna mpikambana telo ao amin’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo izay hisahana vonjimaika ny andraikitra nomena ny ben’ny tanàna sy ireo mpikambana ao amin’ny birao mpanatanteraka sy ny Filan-kevitra monisipalin’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo, Faritra Analamanga.
- tendrena ho mpikambana ao amin’ny Delegasiona manokan’ny Kaominina ambonivohitra Antananarivo ireto olona voalaza anarana manaraka ireto:
- Andriamatoa Guy Rivoniaina RANDRIANARISOA, Filoha;
- Andriamatoa Edouard RAZAFIMANANTENA , Lefitra voalohany
- Andriamatoa Patrick RAZAKAMANANIFIDINY, Lefitra faharoa
- Ny Lehiben’ny Faritra Analamanga, ny Prefet de Police ho an’ny Tanànan’Antananarivo no miadidy , araka ny tandrify azy avy, ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao izay havoaka amin’ny Gazetim-panjakan’ny Repoblikan’ny ary hampahafantarina amin’izay rehetra mety ilàna azy.
Antananarivo, ny 3 febroary 2009
Azo heverina ihany koa ny hoe :io manendry PDS io no ala olana hitan'ny fitondrana mba hitazomana ny TGV eto Antananarivo ka tsy ahafahany mamonjy ny any amin'ny faritany hafa, hitarika sy hampikorontana ny any indray, izay efa mba milamindamina amin'izao fotoana izao.
Hita tsara fa nanapak'evitra hijanona eto Antananarivo izao ny TGV noho io fanendrena PDS io. Mety ho paika tsara ihany io izany raha ny hevitro manokana. Fa tsy mahay koa angamba aho ka mora fitahina.
Nampidirin'i pi @ 23:55, 2009-02-04 [Valio]
Mba hono ho'ahy : misy radio na télé mahasahana ny nosy iray manontolo ve 'zao any. Raha tsia ... dia inona ny akom-baovao henon'ny any amin'ny faritany amin'izao fotoana izao?
Nampidirin'i Tokinao @ 14:50, 2009-02-05 [Valio]
Raha mihaino ny RFI manko no ianteherana dia ahiana hanaraka an'i Andry ny vahoaka any.
Nampidirin'i Tokinao @ 14:51, 2009-02-05 [Valio]
ka izay no mahatonga ny mpitondra fanjakana mankany amin'ny faritany hanazava sy hanoro ny tena zava-misy marina fa toa mbola tsy mahafeno tanteraka ny Nosy ny RNM sy TVM. Ka asa tokoa izay mety ho fiafaran'izy ity fa dia samy miandry e.
Nampidirin'i pi @ 17:22, 2009-02-05 [Valio]
tsy mbola misy radio na télé mahasahana ny nosy aloha izao. izaho koa mitovy hevitra hoe mety stratégie itazomana azy eto tana ilay fametrahana PDS. Izy mantsy efa mahatsiaro ny tenany hoe président de la République ka raha vao resaka pouvoir dia misarangotra ohatra ny inona. Diso tia fahefana loatra
Nampidirin'i janoary @ 17:49, 2009-02-05 [Valio]
Dia tsapa tokoa izao fa paik'ady iny nataon'ny fitondrana nanendry PDS iny. Jereo ary ny tohiny fa manomboka ny fizarana vary (vidina mora kokoa: 1000 ar/kg maximum) amin'ny faritra Antananarivo. Raha jerena tsara ny fotoana dia misy safidy tsy maintsy hataon'ny olona mpanaraka TGV eto, hilahatra vary ve sa hametraka lehiben'ny fokontany. Mino aho fa mbola hitohy ny zavatra tahaka an'izany mandritra ny Asabotsy ho filazana ny GVT Transition à la TGV.Safidy tsy maintsy hatao: PPN ve sa GVT tetezamita, dia wait and see
Nampidirin'i pi @ 22:50, 2009-02-05 [Valio]